Maitiro Ekugara Nhare Nesimba Rako Wiricheya
Chinangwa che a wiricheya ndeyekupa kuzvimiririra uye rusununguko kune vanhu vanogona kuona zvisingaite kufamba famba vasina a wiricheya. Ingori 1 kusvika 2% yevanhu vanonyatsoda a wiricheya parizvino une imwe kana imwe yekushandisa. Kana iwe kana yako mhuri uchigona izvi, iwe unofanirwa kufunga nezvako rombo rakanaka.
Iko hakuna kudikanwa kwekunzwa uine mhosva kana iwe ukaitika kuve uri wevamwe vane rombo shoma. Iwe unogona kubatsira vamwe vangangodaro vasina kuita rombo rakanaka senge iwe. Vamwe vanhu vanogona kunge vasina hanya asi kune vamwe vanhu vasinganzwisisike kana zvasvika kune vamwe vari kutambura.
wiricheya kana Scooter?
wiricheya vashandisi vane mhando dzakasiyana dzekuremara. Scooter inogona kunge iri sarudzo iri nani kune avo kune vamwe nekuti inopa kufamba vasina kugona kwavo kutenderera vega vatorerwa.
Vamwe vanhu vanogona kutadza kufamba madaro marefu kana vari kunze uye vangazobatsirwa nerumwe rudzi rwekuwedzera nzira ye kutakura. Simba wiricheya iri sarudzo hombe kune vanhu vari mune ino mamiriro.
Kuwanazve Kuzvimirira Kwako
kana wako kuremara zvinoita kuti zviome kana kusakwanisika kufamba, a wiricheya inzira huru yekuwanazve imwe yerusununguko uye rusununguko. Paunenge iwe wajaira uye ukapinza mune yako mararamire, iwe unozove unonyanya kuvimba neako wiricheya kupfuura iwe unogona kufunga.
Nekudaro kuichengeta yakachengetedzwa zvakanaka uye mukuita kwakanaka kurongeka ichave yekutanga. Ichi chinhu chaunofanira kuchengeta mundangariro kubva pakutanga chaipo.
Kuitira iyo wiricheya kushandira zvinangwa zvako, iwe uchafanirwa kuve nemikova, nzira dzekubuda, madhoo uye nzira dzemumigwagwa dzakaringana kukwana yako wiricheya.
Terrain yese Mawiricheya
Nzira dzomumigwagwa hadzisi idzo nzvimbo dzese Mawiricheya uye kunyangwe iri iri nhau dzakanaka, iwe unofanirwa kutarisa kune iyi mhando ye wiricheya sezvaungaita bhasikoro remakomo. Kana iwe uchizotakura yako wiricheya mumotokari, iwe uchafanirwa kutora saizi uye dhizaini yemota kuverengera.
Kunyangwe paine nzira dzekufamba-famba mumota yakajairwa, kana iwe uchizo famba famba uine wiricheya nguva dzose, uchafanirwa kutarisisa paunosarudza mota yakakodzera.
Hatchbacks kana mavans ane makuru ekutsvedza masuo kana kumashure zvigaro zvakanaka sarudzo kune avo vanofanirwa kutakura avo wiricheya nguva dzose.